प्रदेश न-२ मा आत्महत्या, लागूऔषध तथा बलात्कारका घट्नाहरु बिक्राल अवस्थामा बढ्दै
सिरहा : नेपालकाे सात वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश न-२ मा रहेका ८ जिल्लाहरुमा आत्महत्या,लागूऔषध सेवन तथा ओसारपाे सार सहित बलात्कार का घट्नाहरु दिन प्रति दिन बढी रहेकाे तथ्याङकले देखाई रहेकाे छ । प्रदेशकाे १३६ स्थानिय तहहरूमा सात महिनाको अबधिमा २सय ७७ जनाले आत्महत्या गरेका छन । जसमध्ये झुण्डिएर १ सय ८९ जना, विष सेवन गरी ८३ जना र आगो लगाएर पाँच जनाले आत्महत्या गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिएसपी दानबहादुर थापाले बताएका छन । ५ महिनामा साउन यता लागू औषधसहित ५ सय ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेक छन् । पक्राउपरेको ठूलो संख्या १६ देखि २५ वर्ष भित्र का २ सय ५१ जना युवाहरूलाई लागू औषधसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नं. २, जनकपुरले बताएकाे छ । यस्तै सात महिनाको अबधि मा २ सय ३८ बलात्कार मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको छ । साउनदेखि माघ सम्ममा जबर्जस्ती करणी मुद्दा १ सय ६० र जबर्जस्ती करणी उद्योगमा ७८ मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बताएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दामा १० वर्ष मुनिका २२ बालिका समेत बलात्कृत भएका छन । १६ वर्षमुनिका सबैभन्दा बढी १ सय ३० जना बालिका बलात्कृत भएका छन । जस मध्ये १६ वर्षभन्दा माथिका १ सय ८ जना बलात्कृत भएका छन भने २ सय ३८ बलात्कारका घटनामध्ये चिनजानकै २ सय ६० जना बलात्कारमा संलग्न भई घरभित्र १ सय ४९ र घरबाहिर ८९ बलात्कारको घटना भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नं. २ जनकपुरले बताएकाे छ्।